Jajaja, 55555, kkkkk: Sida Loogu Qoslo Luuqadaha Kale | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Maxay Carro-dibir?
Waa Maxay Ganacsi?……….Qormada 1-aad
BBC Somali — November 16, 2019
Adigu ma sidaan ayaad qori lahayd: “haha” mise waxaad qori lahayd “Alla rabiyoow, arrintan aad bay u qosol badan tahay, ma kala joojin karo qosolka!!!”?
Waa dhab in caalamka oo dhan la isla wada gartay inaysan dadku badankood wakhtiga iska luminin – ama lacagta isticmaalka khadka isla khasaarinin – marka ay wax qorayaan.
Taasi waa sababta ay dad aad u badan erayo ugu soo gaabiyeen hadallada qaarkood, marka ay dareenkooda cabirayaan.
Sidaas darteed, qosolku waa cod la isku wada waafaqsan yahay caalamka oo dhan, sax?, Hagaag, sida aad moodeyso ma aha marka ay timaado in la qoro.
Sida ku qoran qaamuuska ay sameysay jaamacadda Oxford ee luqadda Ingiriiska, habka ugu saxan ee loo qoro qosolka luqaddaas waa ha ha ama Ha ha ha!
Laakiin sida aan aragnay, qoritaanku wuxuu u baahan yahay boobsiis, hab fudud iyo soo gaabin – Sidaas darteed waxaa laga yaabaa inuu qof kuu soo diro iyadoo uusan wax firaaqo ah u kala dhaxeynin oo u qoran sidan haha.
Dadka qaarkiis xitaa waxay ka dhigeen hehe… inkastoo aan taas loo badneyn.
Haddii aad dooneysid inaad ku qortid qosolkaaga luqadaha Portuguese-ka iyo Korean-ka, wuxuu noqonayaa sidan kkkkkk
Dadka ku hadla luqadda Portuguese-ka gaar ahaan kuwa ku nool waddanka Brazil, waxay qoraalka qosolka kusoo gaabsadaan xarafka k, kaasoo loogu dhawaaqo qaab u eg sida “kja“.
Haddii aad dhinaca online-ka ku muujineysid inaad aad u qososhay waxaad u baahaneysaa inaad qortid kkkkkk – inkastoo dadka qaarkood xitaa ay qoraan rsrsrs oo laga soo gaabiyay risos (qosol)
Marka aad dooneysid inaad qosol ku qortid luqadda luqadda Greece-ka, oo waliba aad rabtid inaad aad u qososhid, xitaa haku fikirin inaad ka dhigtid hahaha ama kkkkkk… Laakiin xaxaxa ayaa ah xarfaha saxda ah ee aad u baahan tahay.
Si lama filaan ah waxaa isugu aadday in dadka ku hadla luqadda Russia ay mararka qaar qosolka qoraalka ah u isticmaalahan xarfaha хахаха.
Laakiin marka aad dooneyso inaad si asal ah ugu qortid luqaddaas waa inaad adeegsatid erayadan Olololo.
Maxaad sameyneysaa marka aad dooneyso inaad qosolkaaga ku qortid luqadda Lingala – oo ah afka ay ku hadlaan dadka kasoo jeeda qowmiyadda Bantu oo ah in ka badan 8 milyan oo ku nool DR Congo dalalka dariska la ah?.
Erayada ugu fiican ee aad qosolkaaga u adeegsan karto waa kiekie. ama xitaa kiekiekie, waa haddii aad dooneyso inaad qosolka sii qurxisid.
Luqadda saxda ah ee Spanish-ka sida qosolkeeda loo qoro waa “Ja, ja, ja”, laakiin inta badan dadka waxay isticmaalaan jajaja – ama xitaa jajajajaaaa haddii ay si waalli ah u qoslayaan.
Waxaad sidoo kale qosolka kusii kordhin kartaa erayadan je, a jejeje ama jijiji iyo sidoo kale jojojo!
Sida qosolka loogu qoro luqadda Fransiis-ka, waa hahaha… laakiin dadka ku hadla af faransiiska waxay inta badan taas baddalkeeda adeegsadaan mdr.
Sabab? Waxaa laga soo gaabiyay mort de rire (qosol ayaan la dhimanayaa) wayna ka dhakhso badan tahay xagga qorista.
Waddanka Nigeria, waxay dadku jecel yihiin inay soo gaabsadaan erayo lagu qoslo – sababtuna ma aha inay gaaban yihiin, balse waa inay xoog badan yihiin.
Waxay isticmaalaan lwkmd oo laga soo gaabiyay jumladda laugh wan kill me die – taasoo micnaheedu yahay marka uu qofku qosol la dhimanayo – waxa lagu qoslo ee uu arkay ama maqlay awgiis.
Haddii uu qof saaxiib ah dalka Thailand kaaga soo qoro dhowr 5, u diyaar garow wax farxad leh oo lagu qoslo; waayo Luqadda Thailand waxaa qosolkeeda loo qoraa 555555
Alifbeetada luqadda Carabiga waa tan labaad ee loogu isticmaalka badan yahay dunida oo dhan, marka laga soo tago tan Latin-ka.
Waxaa caalamka si weyn ugu faafiyay islaamka, waxayna ku qoran tahay Qur’aanka Kariimka ah.
Dadka luqadda Carabiga adeegsada waxay qosolkooda qoraalka ah ka dhigaan hhhhhh ama ههههه
Luqadda Japan, erayga qosolka loo qoro waa warai ama 笑い
Waxaad sidoo kale kusoo gaabsan kartaa www ama wwwww marka aad sida aadka ah u qosleyso.
Waddanka Malaysia, heer kale ayey dadku sii gaarsiiyeen xarfaha qosolka lagu muujiyo.
Waxaad qosolkaaga u qori kartaa: Ha
Ama sida saxda ah waxaad uga dhigan kartaa: Ha3 (oo ka dhigan hahaha = ha x 3 = ha3)
Ha walwalin, qoraalka nagama uusan khaldamin, waxaan runtii u qoreynay sidan ahahah.
Luqadda Italian-ka, xarafka h laguma dhawaaqo, laakiin wuxuu xarafkaas awood ku leeyahay in lagu kabo xarfaha shaqalka ee u dhow.
Sidaas awgeedna, marka la isticmaalayo h oo uu ka dambeeyo shaqalka a balse uusan ka horreynin, qosol lagama wado, waayo waxaa la diidayaa inay ku qasanto eray kale oo micnihiisu uu noqonayo si kale, kaasoo loo dhigo ha (heysasho).
Sideed qoraal ahaan ugu qosleysaa luqadda Norway? markii dhabta laga hadlo, dad badan oo waddankaas u dhashay waxay adeegsadaan hahaha.
Laakiin qaar kale waxay ka door bideen inay si khaas ah ka dhigaan høhøhø… waa marka aan lagu darin dadka ku hadla luqadda Danish-kakuwaasoo qosolkooda u qora hæhæhæ (oo u dhow hehehe).
Tags: 55555Jajajakkkkk: Sida Loogu Qoslo Luuqadaha Kale
Next post Faallo Buugga: HALBEEG, Hirdanka Fikradaha iyo Habraaca Fahanka
Previous post "Waxaan dhibbane u noqday WhatsApp-ka la jabsaday waana naxsanahay hadda"